Nbudata Mil Mi-26 FSX & P3D - Rikoooo
downloads 23 417
Ihe nlereanya site na ikuku ikuku, nke Michael Pook, emelitere FSX/P3D melite site Rikoooo
Emelitere na 30 / 04 / 2019: Prepar3D v4 dakọtara, ntụgharị gaa n’asụsụ ụmụ amaala FSX/P3Dusoro v4
The ngwugwu atụmatụ a gbazie na dechara ọhụrụ VC na 2D panel, ebe ọ bụ na ndabara VC-amụtaghị ọtọ gauges na nwere na-ezighị bitmap na udidi nchekwa, nke mere na aka ekpe VC ngalaba na nri na-ekpe nkuku ndị na-acha ọcha.
O gosiputara ogwe aka 2D ohuru, nke Vladimir Zhyhulskiy mebere maka ya FSX ụdị, mana ugbu a gbanwetụrụ ka ọ dabara na VC. Ihe ngwugwu ahụ nwekwara mmetụta anwụrụ ọkụ gbakwunyere. Nhazi VC na 2D ọhụrụ nhazi na nhazi nke Michael Pook. Nlere nke Alphasim.
The nnù Mi-26 (Russian: Миль Ми-26, NATO akuko aha: Halo), nyere ngwaahịa koodu izdeliye 90, bụ a Soviet / Russian arọ iga helikopta. Na ọrụ na nkịtị na ndị agha rụọ, ọ bụ ndị kasị ibu na ndị kasị dị ike helikopta mgbe ka esiwo n'ime mmepụta.
Design: Na 1970s, ndị Soviet Union chọrọ na-enye a nọchiri ndị Mi-6 ma na nnọọ elu arụmọrụ. A mbụ prototype mgbe ahụ wuru, o buru ụzọ ama on December 14 1977 arụmọrụ ọnwụnwa agha nke mba Soviet malitere n'oge 1982, ọ banyere ọrụ ndị na-esonụ afọ. February 3, 1982, enye ama anam ediwak ụwa ndia, gụnyere a ụgbọ elu na kacha ibu (kwajuru) nke 56,769 n'arọ ka 2,000 mita. (Wikipedia)
Onye edemede: elkpụrụ ikuku site na ikuku ikuku, nke Michael Pook, emelitere FSX/P3D melite site Rikoooo